USB caraf udgoon alwaax diffuser saliid lagama maarmaan - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Home » Product » diffusers caraf
USB caraf udgoon alwaax diffuser saliid lagama maarmaan
Heer ee Advantage. www.outstandingdm.com 1. In ka badan 15years saaridda diffsuer Udgoon iyo haystaha Shumaca,Reed Diffuser 4.TOP1 Udgoon warshad diffuser qeybiyaha 2. Adeegga One-stop badan 15years 5. than15years More waayo-aragnimo dhoofinta 3. macradka Big warshad 6. Muunado ayaa diyaar u ah in aad Products xaqiijin xiriira Waa maxay sababta Dooro Us TOP 1 Caraf udgoon Diffuser Factory: Design fiican &Sameeyo Co., Ltd. La xiriir Our warshad: Lucy @ outstand ...
Heer ee Advantage. www.outstandingdm.com
1. In ka badan 15years saaridda diffsuer Udgoon iyo haystaha Shumaca,Reed Diffuser 4.TOP1 Udgoon warshad diffuser qeybiyaha
2. Adeegga One-stop badan 15years 5. than15years More waayo-aragnimo dhoofinta
3. macradka Big warshad 6. Muunado ayaa diyaar u ah in aad xaqiijin
La xiriir Our warshad: Lucy @ outstandingdm.com & Tel: +86 186 21693186
Certificates CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm. shahaadada kale haddii aad u baahan tahay
suuqyada waaweyn America, Europe, Australia, Bariga Dhexe, iyo koonfur bari Asia, dunida oo dhan
Faa'iidooyinka Factory Design fiican–10 waxyaabaha cusub ee toddobaadkii.
Adeegga fiican–marka hore Customer,24 saac adeeg online,waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta:Lucy @ outstandingdm.com
Tayada fiican–100% kormeerka alaabtooda oo dhan
Kooxda fiican–"Time waa dahab" adiga iyo noo. waxaan heysanaa koox xirfadeed si aad u taageeraan.
waxyaabaha Our leeyihiin ee la soo dhaafay testings sida aad u baahan tahay, tus: CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm.
Transport: Door in ay Door;dhibic maraakiibta;Air shixnad;shixnaddii badda.
Q5. Ma caadi baa in daabaco aan logo & isticmaal farshaxanka gaar ah?
Pls noo soo dir aad farshaxanimada, waxaan u samayn kartaa. Waxaan taageeri karaa inay ka sameeyaan in tiro yar oo si. Bilow ka 50-100-500-1000pcs (kharashka noqon doonaa kala duwan oo ku salaysan tirada kala duwan)
Q6. Waa maxay taariikhda bixinta tusaale ahaan ah?
Q7.How badan udgoonkii aad leedahay?
Xarrago Dhalo White Square Glass Diffuser Wooden
Cool Qaaca uumi Electric Muhiimka ah Oil Udgoon Diffuser
Raaxo Dhalo Black Glass Reed Diffuser